INDAWO YOKUHLALA YASEPARADISI ETHANDWAYO, BATANG KALI
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguLow
· Iibhedi eziyi-20
Eyakho indawo yokuhlala yabucala eBatang Kali enomoya omtsha kunye nokubuyela kwindalo. Kulapho ucofa ukusetha kwakhona kwaye ube noxolo. Ukuhamba nje ngemizuzu engama-45 ukusuka eKL, imizuzu engama-20 ukuya eGenting Highlands kunye nemizuzu emi-3 ukuya eHulu Yam Lama.
Igumbi lethu lokulala eli-4 elipholileyo libonelela ngendawo yokuhlala ebanzi kunye nentuthuzelo yasekhaya. Ungachitha iiyure zakho nabantu obathandayo kwindawo yethu yokuhlala.
IKumkanikazi kunye neebhedi ezinobukhulu obunye, ishampu, iitawuli njl.njl. Ikhitshi eligcweleyo, ifriji, ioveni, iimbiza neepani, isitovu serayisi, iSteamboat, umgodi weBBQ, iTV kunye neWiFi. Ilungele ukuhlangana kosapho. Ulala ngama-20 ngokukhululeka.
4.78 ·Izimvo eziyi-95
4.78 · Izimvo eziyi-95
Indawo yokubuyela umva ifumaneka eBatang Kali, eSelangor kufutshane neHulu Yam.
Idilesi :Lot 7, Jalan Besar, Kampung Batu 30, 44300 Batang Kali, Selangor 44300
Umbuki zindwendwe ngu- Low
Eli likhaya leholide elisetyenziswa lusapho lwethu, kungoko sisenokungasoloko sikhona ukuze sinamkele endlwini. Abagcini bethu bahlala ebumelwaneni kwaye baya kukwamkela endlwini yethu. Baza kuba senkonzweni yakho ukuqinisekisa ukuba uhlala ukhululekile kwaye uyonwabile. Into ekufuneka uyenzile kukubuza!
Ungasoloko ufikelela kuthi ngo-Airbnb okanye kwindawo yethu.
Eli likhaya leholide elisetyenziswa lusapho lwethu, kungoko sisenokungasoloko sikhona ukuze sinamkele endlwini. Abagcini bethu bahlala ebumelwaneni kwaye baya kukwamkela endlwini y…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Batang Kali